i-Cricket Australia imemezela ukuhoxa kuhambo lwase-SA
Tue, 02nd February 2021
eGoli: NgoLwesibili i-Cricket South Africa (CSA) yaziswe i-Cricket Australia (CA) ukuthi uhambo lalapha obekumele liqale ngasekupheleni kwalenyanga angeke isaqhubeka ngenxa yokusaba i-Covid-19.
i-CSA ifisa ukusho ukuthi iphoxekile ngezindaba. Ukuphepha kwabadlali hlezi kubalulekile futhi ezinyangeni ezidlule, i-CSA ibambe izingxoxo eziningi ne-CA mayelana nezivumelwano ze-Covid-19. Lezingxoxo zifake ukubheka janye nokuphatha kwezingozi ze-Covid-19 kanye nokuxhumana nosolwazi bezempilo okubalwa khona i-SA Ministerial COVID Advisory Committee. i-CSA isebenze kanzima ukuhlangana nezidingo ezishintshayo ze-Australia.
i-CSA iphoxekile ikakhulukazi njengoba i-South Africa kade ivakashelwe i-Sri Lanka kwi-bio-secure environment (BSE) e-Centurion, ngaphandle kokwephula umthetho olandelwayo. Njengamanje iqembu le-Pakistan Women livakashile kwi-BSE evikelekile eThekwini.
Ngaphandle kwama-BSE amabili ayimpumelelo, i-CSA iqhubekile ne-Momentum One-Day International Cup kwi-BSE e-Potchefstroom futhi akekho obikwe ukuthi uthole igciwane. Ngaphezu kwalokho, kumele kuphawulwe ngokuthi uMongameli u-Cyril Ramaphosa umemezele ukuxegiswa kokuvalwa kwezwe izolo ebusuku ngenxa yokuncipha ngo-75% kwabantu abatheleke nge-Covid-19 selokhu kwafikwa esicongweni se-second wave ngo-December 2020.
“Siphoxeke kakhulu ngesinqumo se-CA,” kusho i-Director of Cricket, u-Graeme Smith. “i-CSA ibisebenza ngokuzikhandla emasontweni adlule ukuqiniseka ukuthi sikwenze konke obekulindelwe i-CA.”
“Bekuhlelwe ukuthi kube uhambo olude kwi-BSE, nemidlalo emithathu ye-Test series ekade ihlelwe ukuqala ngokufika kwe-Australia ngokuhamba kwalenyanga. Ngakho ukwaziswa ngesinqumo se-CA sekuphele isikhathi kuyacasula.”
i-CSA’s Chief Medical Officer, u-Dr Shuaib Manjra, unezezele ukuthi akukho okunye obekungenziwa i-CSA ukujabulisa i-CA kanye nokulungiselela kahle kakhulu.
“Izivumelwano ekade sizidlulise kwi-CA bezingakaze zibonwe,” esho. “Okokuqala, savumelana ukuthi iqembu lama-Proteas lizongena kwi-BSE izinsuku eziwu-14 ngaphambi kokufika kweqembu lase-Australia, kwashintsha izinhlelo ngohambo lwamanje lase-Pakistan.”
“Phakathi kwamanye amalungiselelo abalulekile enziwa kade esezindaweni ezine (amahotela amabili nezindawo ezimbili) obekumele kulandelwe ukusebenzisa i-BSE ngaphandle kokuthintana nabantu abangaphandle kwalendawo.”
“Savuma ukuba nama-BSE amabili ahlukene futhi kwavunyelwa i-Australia ukuthi isebenzise i-Irene Country Lodge, esayisebenzisa ne-Sri Lanka, kukhona abasebenzi abancane emsebenzini.”
“Mayelana namalungiselelo, ama-Proteas ebezoya kwelinye ihotela. Uma siqhubeka, bonke abasebenzi basehotela, abaphathi bomdlalo kanye nabashayeli bamabhasi bebezongena kwi-BSE izinsuku eziwu-14 ngaphambi kokufika kwe-Australia.”
“Ngaphezu kwalokho, i-CSA ibizimisele ngokuletha i-tracking system ye-Australia nokho kubiza, ukuqiniseka ukubhekwa kwabasondelane nabo uma kukhona otholakala enegciwane. Iqembu elivakashayo belizoba ama-VIP ezikhumulweni zezindiza, emuva kokuthi kungenelele uhulumeni ukuqinisekisa lokhu.”
“Lezi ezinye zezivumelwano ekade zibekwe i-CSA. Senze okungaphezu kwamandla ukuqniseka ukuthi uhambo luyaqhubeka.”
u-Pholetsi Moseki, i-CSA Acting Chief Executive Officer uthe: “Kuyadabukisa ngempela emuva kokuzibandakanya kanye nemizamo eyenziwe ukuqiniseka ukuvakasha okuphephile kwe-Australia, uhambo luphazamisekile. i-CSA ithole izindleko kwizigaba sokuhlela futhi ukwesulwa kohambo kuletha ukulahlekelwa kwemali.”
“Kulesikhathi esiyinselelo kwikhilikithi kanye namazwe angamalungu, sikholwa ukuthi isinqumo esithathwe i-CA siyasolakala futhi kuzoba nomthelela omkhulu ekusimeni kwamazwe adlalela kancane ekhilikithi.”
Izinti ezinhlanu zika-Nauman zinqobele i-Pakistan i-Test okokuqala u-Rabada ukhiphe inti yesi-200 ngaphambi kokuthi izinti selishonile zihlukumeza ama-Proteas Ikhulu lika-Fawad lishiya ama-Proteas ngemuva i-CSA ihalalisela ama-Momentum Proteas ngokuqoba i-series ne-Pakistan u-Rabada uhole ukuqeda kangcono njengoba ama-Proteas ezibuyisele e-Karachi u-Klassen uzoba ukapteni weqembu lama-Proteas lama-T20 eliya e-Pakistan Izinti ezintathu za-Sipamla zisiza ama-Proteas anqobe kahle i-CSA ihalalisela ama-Proteas ngokunqoba i-Test series idlala ne-Sri Lanka u-Elgar ushaye ikhulu ngaphambi kokuthi i-Sri Lanka izibuyiselele u-Nortje no-Elgar benza kulawule ama-Proteas osukwini lokuqala eGoli u-Mulder, u-Nortje no-Sipamla bakhiphe izinti ezimbili kunqoba i-SA kalula